Motorola waxay soo saari doontaa taleefan isku laaban dhamaadka sanadka | Androidsis
Motorola waxay xaqiijineysaa inay yeelan doonto taleefan la laaban karo
Eder Ferreno | | Motorola, Mobiles
2019 wuxuu noqonayaa sanadkii iskugeynta taleefannada casriga ah. Tani waa wax soo ifbaxay usbuucii la soo dhaafay, oo leh moodallo cusub oo qaybtan ka mid ah Huawei Mate X ama Galaxy Fold. Noocyo kale oo badan ayaa sidoo kale hadda ka shaqeynaya taleefannadooda casriga ah. Tani waa kiiska noocyada qaar sida Honor o Alcatel, kuwaas oo horeyba waxoogaa macluumaad ah nooga siiyay. Sidoo kale Motorola waxay ku shaqeysaa taleefankeeda isku laabma.
Lahaansho Motorola waxay xaqiijisay inay ku shaqeeyaan taleefan isku laaban. Kiiskiisa, soo saaraha ayaa sheegay in qalabkiisa uu gaari karo suuqa sanadkan. In kastoo hada aan si buuxda loo hubin inuu imaan doono 2019.
Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay xaqiijisay inay muddo dheer ka shaqeynayeen qaybaha isku laaban. Laakiin in aaladda ay diyaarinayaan way ka duwanaan doontaa noocyada Samsung iyo Huawei soo bandhigay usbuucii la soo dhaafay. Xaaladdan oo kale, farqiga ugu weyn wuxuu ku noolaan doonaa shaashadda, taas oo lagu laaban karo kalabar. Iyo sidoo kale gudaha markii qalabku xiran yahay.
Motorola oo sii hadlaysa ayaa sheegaysa in taleefankeedu uu noqon doono mid aad u kooban. In kasta oo shirkaddu ay hadda ka shaqeyneyso dhowr nooc oo noocyo ah. Maaddaama ay sidoo kale leeyihiin nooc leh laba laab oo xagga horumarka ah oo uu ku jiro hal shaashad oo laba laaban. Laakiin waxay u muuqataa in qaabkani aanu ahayn dookha koowaad.
Maxaa cadaaday waa in Motorola ay cadahay taas waxay rabaan inay suuqa ka bilaabaan moodooyin isku laaban. Laakiin iyagu kuma jiraan sida ugu dhaqsaha badan sida noocyada kale ee suuqa ku dhaca. Marka waa inaan sugnaa dhowr bilood bilowgeeda. Sababta ayaa la mid ah noocyada kale sida Honor ama Alcatel ay bixiyeen.
In kasta oo shakigu wali ku saabsan yahay suurtagalnimada bilaabista Motorola RAZR laabma, kuwaas oo dhowr jeer ay soo daateen. Hadda ma jiraan wax xaqiijin ah oo ku saabsan arrintan. Marka waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii aan ugu dambeyntii ka sugi karno taleefankan isaga ama in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Motorola waxay xaqiijineysaa inay yeelan doonto taleefan la laaban karo
Asus waxay xaqiijineysaa taleefannada ay cusbooneysiin doonaan Android Pie
Mar dambe uma baahnid inaad ku xasuusato lambarkaaga sirta ah ee 'Android'